Golaha Shacabka oo maanta soo gaba-gabeynaya dhameystirka…
Golaha Shacabka Oo Xukumada U Gudbayay Dalaba Ku Aadan In La…
Xildhibaannada Golaha Shacabka BFS oo labadii cishe lasoo dhaafay ka dooday xeerka matalaadda Gobolka Banaadir waxa ay maanta soo gaba-gabeynayaan dooddaas, iyaga oo cod gelinaya si loo ansixiyo ama loo diido.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka Xildhibaan Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa Xildhibaannada ku wargeliyay in waqti hore ay xaadiraan Xarunta Villa Hargeysa oo ay si KMG ah uga shiraan.
Saacadda u qoran in fadhiga Baarlamaanka uu furmo ee 9-ka Subaxnimo ayuu ka dalbaday Mudanayaasha in ay ku tagaan Xarunta si loo furo kulanka maanta oo dood iyo codeyn isugu jira.
Sidoo kale Guddoomiyaha Golaha Shacabka waxa uu fariin u diray Xildhibaannada ku sugan Magaalada Muqdisho ee cudur-daar la’aanta ka maqan fadhiga Golaha, waxaana uu ka dalbaday in ay u hoggaansamaan xeer hoosaadka u yaalla.
Xildhibaannada Golaha Shacabka ayaa todobaadkii lasoo dhaafay waxa ay si xiriir ah u shaqeeyeen Lix maalmood, waxa ay kaga doodeen xeerka matalaadda kuraasta Gobolada Waqooyi oo ay ansixiyeen iyo kan Gobolka Banaadir oo maanta lagu wado in ay cod geliyaan.